I-Focusfreda iyaqhubeka nokuphonononga kunye nokwenza izinto ezintsha kwimveliso kunye nokusebenza ngomgaqo othi "Umgangatho uza kuqala" kwaye "ugxile kuMthengi" kwaye uphuhliselwe kwishishini elibanzi elidibanisa uphuhliso, imveliso kunye nokuthengisa.
Shandong Focusfreda Biotech Co.,Ltd.ngumvelisi wekhontrakthi yobungcali eTshayina.Sizinikezele ekwenzeni uluhlu olubanzi lwezongezo zokutya kubathengi behlabathi, ezibandakanya ii-capsules, ii-softgels, iipilisi, umgubo, ulwelo kunye neegranules.Inkonzo ebanzi yokumisa enye inokubonelelwa.Unokufumana inkxaso yobuchule bokuqulunqa, iidosi ezahlukeneyo, ukupakishwa okulungiselelweyo kunye neempendulo ezikhawulezayo kuthi.Ngenkqubo engqongqo yokulawula umgangatho kunye nesimo sengqondo esinenkathalo, siyakunceda ukuba uthathe ulawulo olupheleleyo lomgangatho weemveliso zakho.
I-Focusfreda inokubonelela ngenkonzo yokumisa enye yobuninzi obuphezulu kunye nezongezo zokutya ezilungiselelweyo kunye neemveliso zempilo yendalo, ngenkonzo ekhethekileyo, amaxabiso akhuphisanayo kunye nawona maxesha aphambili kushishino, afanelekele ukukunceda wenze ezona mveliso zikumgangatho ophezulu ndikhangela i.
2.uPhando kunye noPhuhliso
Iingcali zethu zophuhliso lwemveliso, abaqulunqi, iikhemisti ezihlalutyayo kunye neengcali zentengiso banokuqonda okuqinileyo kwayo yonke imiba yezongezo zokutya kunye neshishini lokhathalelo lwempilo..Nokuba unefomula egqityiweyo okanye umbono nje, siya kukuxhasa!
Siqinisekisa imigangatho ephezulu yomgangatho kunye nokhuseleko.Zonke iimveliso zethu zenziwe kwaye ziqinisekisiwe kwi-ISO efanelekileyo - imigangatho ye-NSF, i-BRC evunyiweyo kwaye iphuma kwi-OEM ehloniphekileyo kunye nalo lonke uvavanyo olufanelekileyo kunye nesiqinisekiso.
Ilabhoratri yethu kunye ne-R&D iya kukuxhasa ngetekhnoloji ephezulu kunye nenkuthazo eqhubekayo kuphuhliso lweemveliso ezintsha.Ngokuthanda kwethu kunye nothando kwimpilo yabantu kunye nobuhle, siya kukuzisa umgca weemveliso eziphilayo kwaye sikuncede ukwandisa inzuzo yokuthengisa iimveliso zakho.